WARSAXAAFADEED:YAAN LAGA DAMQAN WAQTIGII WUU KAA DHAMMAADA | Somaliland.Org
WARSAXAAFADEED:YAAN LAGA DAMQAN WAQTIGII WUU KAA DHAMMAADA
March 25, 2009	War saxaafadeedkii uu xisbiga UDUB soo saaray, wuxu na xusuusiyey dhammaadkii 1990 markii dalkii Soomaliya la odhan jirey badankiisu gacanta u galay jabhadihii hubaysnaa sida SNM, SPM iyo USC, isla markaasna uu kacdoonka dadweynuhu ka bilaabmay xaafadihii madaxtooyada ku xeerna, dabadeedna kooxdii la magac-baxday Manifesto ay talo ula tageen Maxamed Siyaad Barre kuna yidhaahdeen muddo badan ayaad madaxweyne dalka xukumaysay iminka dadkii wuu kaa soo hor jeeda ee iska tag oo aan dawladda Talyaaniga magangelyo kuu weydiino, halkii wax kale laga filaayey ayuu Maxamed Siyaad Barre Odayadii ergada ahaa ugu jawaabay (Mucaaridku, iimaanka laga qaad maxay doonayaan, may Dalku waa barwaaqee wax-soo-saarka beeraha iyo kaluun badda kala soo baxaan). Jawaabtii Maxamed Siyaad Barre iyo warsaxaafadeedka Xoghayaha Guud ee xisbiga UDUB waxay wadaagaan mid waliba wax aan looga fadhiyin bay la shir yimaaddeen. Labaduba xaalad khalkhal mustaqbali ah bay ku sugan yihiin.
Waa lagu yaqaan miyir beelka nidaam ku mamay hantida ummadda marka waqtigiisu dhammaado, cidda uu ifka ugu neceb yahayna waa cidda xusuusisa inay saacaddii dhammaatay. Waa taas tan KULMIYE u soo jiiday eedeynta iyo aflagaadada qaawan ee war saxaafadeedkaasi ku sifoobay.
Eedeynta naxliga xambaarsan iyo aflagaadooyinka ku jihaysan hoggaanka KULMIYE waxay ka mid noqdeen farsamooyinka ay hawlwadeenka UDUB iyo xukuumaddu ku hantaan kalsoonida Riyaale hore ayaa qaar ugu dallaceen ama mansabyo ku heleen cayda KULMIYE iyo aflagaadooyinka anshaxa iyo asluubta ka baxsan ee madaxda sar sare ee KULMIYE lagula kacay.
Isweydiintu waxay tahay maxaa xilligan isaga ah waxaas oo colaad ah KULMIYE kaga galabsaday UDUB? Maxaa keenay baraq-nuglaanta UDUB iyo Xukuumadda UDUB?
Jawaabtu way fududdahay. Waa mawqifka KULMIYE ee ku aaddan arrimaha muddo kordhinta kaas oo ah:
UDUB iyo Xukuumadda Riyaale way ku guul darraysteen inay doorashadii ku qabataan xilligeedii ahaa 14 abriil, 2008, KULMIYE muddo kordhin sanad ah oo aanay taageerayaashiisu ku qanacsanayn ayuu hore u oggolaaday.
UDUB iyo Riyaale waxay mar kale ku fashilmeen inay doorasho qabtaan muddadii cusubayd ee lagu heshiiyey oo ku beegan 29 March, 2009
UDUB iyo xukuumadda Riyaale waxay quuddarayeen inay helaan korodhsiimo saddexaad, taas oo aanay UDUB u qalmin loo kordhiyo. Arrintaas KULMIYE mawqif cad ayuu iska taagay, inaan korodhsiimo danbe dhicin. Wuxuna aaminsan yahay inay khalad tahay in UDUB iyo xukuumadda Riyaale lagu abaal mariyo xilgudasho la’aanta iyo fadhiidnimada ay ku sifoobeen. Loona baahan yahay in golayaasha qaranku ka talo bixiyeen ciddii umadda gaadhsiin lahayd doorashada.
Ugu danbayn, xisbiga UDUB iyo xukuumadda Riyaale ha ogaadaan inay dushooda tahay ayna qaadaan masuuliyadda wixii ka dhasha warsaxafadeedka dhagareysan ee fidno abuurka iyo naxliga xambaarsanaa.
Gabagabadii waxaan doonaynaa in aan halkan ku xusno:
1. in aan Xisbiga KULMIYE marna u soo bandhigin Ummadda Somaliland balanqaadyo been ah.
2. Xisbiga KULMIYE marna dhiig iyo dhagar toonna kama gelin Qaranka iyo Bulsho weynta reer Somaliland, kumana weerarin taangiyo iyo beebeeyo cisbitaalka guud ee Qaranka.
3. Xisbiga KULMIYE marna ma urursan hanti Qaran, ma iibsan dhul dan guud i.w.m.
4. Xisbiga KULMIYE wuxuu mar walba diyaar u yahay inuu ka qaybgalo Doorashooyin xor iyo xalaal ah oo Dalka ka dhaca. ilaa maalintii Xisbiga KULMIYE la aasaasay ilaa maanta kama qaybgelin wax dagaalo ah ama shaqaaqooyin oo Dalka ka dhacay.
Md. C/raxmaan C/qaadir Faarax Guddoomiye ku-xigeenka 2aad
This entry was posted in Press Release. Bookmark the permalink.	Comments are closed.